CT1EIZ - Network maRadio
musha / Munyori: CT1EIZ
Ini ndinoda kushandisa yangu RFinder HCP-1 hotspot kwese kwandinoenda. Kutanga, nekuti ini ndinogona kushandisa zviri nyore Brandmeister uye TGIF Talkgroups pasina kuita chero shanduko pane hotspot uye yechipiri, nekuda kwebhatiri rayo remukati, ndinogona kuitisa kweanopfuura maawa mashanu, zvisinei nekwandiri - ndichishandisa iyo Wifi yekubatanidza yakasungirirwa kubva ku smartphone yangu . Iyo inotoshanda sebhangi remagetsi, kana ndikada rimwe juzi remagetsi kune yangu smartphone.
Ini ndinogona kuronga matatu manetwork akasiyana akagadzirira kushandiswa. Ndine Brandmeister, TGIF (nhaka) uye TGIF (prime).
The RFinder HCP-1 hotspot iri PI-nyeredzi yakavakirwa, ine MMDVM. Zvese iwe zvunofanirwa kuita, kuzvimisikidza seDMR gedhi. Wobva waenda ku Kugadziridza> Nyanzvi uye tinya Yakazara Hora> DMR GW.
Pandinoda kushandisa Brandmeister Talkgroup, ini ndinongoshandisa yakajairwa TG. Ndiri kureva, ini kana ndichida kufonera TG 91, ndinongoshandisa TG91.
Kana ini ndichida kushandisa TGIF (Nhaka) uye ndichida kushandisa TG 777, ndinoridza TG5000777 Chaizvoizvo, ini ndoda kutanga na '5', padhi ne '0' kudzamara ndawana manhamba manomwe.
Kana ndichida kushandisa TGIF (Prime) uye ndichida kushandisa TG 31039, ndinoridza TG4031039 Chaizvoizvo, ini ndoda kutanga na '4', padhi ne '0' kudzamara ndawana manhamba manomwe.
Zvese zvandinofanira kuita, kuronga radio yangu nemaTG akasiyana. BM inogara iri default, TGIF Prime inotanga ne4 uye TGIF Nhaka inotanga na5.
Izvi zvinogona zvakare kushandiswa kune maDMR + network. Iyo inogara iri imwecheteyo musimboti.
Zadza zvinotevera: (iwe unofanirwa kushandura yako Brandmeister uye TGIF mapassword, DMR ID, nezvimwe:
YemunharaundaAddress = 127.0.0.1
YemunharaundaPort = 62031
Dambudziko = 0
RatidzaLevel = 0
Yakagoneswa = 1
Mutauro = en_GB
Dhairekitori = / usr / yemuno / etc / DMR_Audio
Yakagoneswa = 0
Simba = 1
Kureba = -SELECT_YOUR_LONGITUDE
Kureba = 0
Nzvimbo = "Estoril"
Tsananguro = "Portugal"
Kutanga = 950
Faira = / usr / yemuno / etc / XLXHosts.txt
Chiteshi = 62030
Pasiwedhi = passw0rd
NKM = 6
Nheyo = 64000
Dzokorora = 60
MushandisiControl = 1
Kero = 193.137.237.12
Chiteshi = 62031
Yemunharaunda = 62037
Kunyorwazve0 = 2,4000,2,9,1001
Pasiwedhi = "ENTER_YOUR_PASSWORD"
Zita = SELECT_YOUR_BM_MASTER
Kero = 168.235.109.210
Chiteshi = 55555
Pasiwedhi = "PASSWORD"
Zita = DMR + _IPSC2-QUADNET
Zita = TGIF_Network
Kunyorwazve1 = 1,9990,1,5009990,1
Kunyorwazve2 = 2,9990,2,5009990,1
Kunyorwazve3 = 1,1,1,5000001,999999
Kunyorwazve4 = 2,1,2,5000001,999999
Kero = tgif.network
Pasiwedhi = ENTER_YOUR_TGIF_LEGACY_PASSWORD
Nzvimbo = 0
Zita = TGIF_Network_Prime
Kunyorwazve1 = 1,9990,1,4009990,1
Kunyorwazve2 = 2,9990,2,4009990,1
Kunyorwazve3 = 1,1,1,4000001,999999
Kunyorwazve4 = 2,1,2,4000001,999999
Kero = prime.tgif.network
Pasiwedhi = ENTER_YOUR_TGIF_PRIME_HOTSPOT_PASSWORD
Hekani! Ndakafunga kuti zita remusoro rinogona kutora pfungwa dzako!
Kudzokera kumberi - 2007 maitiro
Kanda pfungwa dzako kumashure, kana uchida, kutangwa kweiyo yekutanga iPhone muna 2007. Unogona achiri kuona izvi paYouTube.
Iyo tenzi yekuratidzira yaive yekupedzisira Steve Jobs pakutanga akaunza ichi chaicho shanduko mudziyo nekuyedza kunyengedza vateereri vake.
Akaedza kuvanyengerera kuti vatende kuti Apple yaitangisa matatu akaparadzaniswa namano.
Akaramba achidzokorora adzokororazve - "iPod, runhare, mudziyo weInternet Kutaurirana - iPod, runhare, mudziyo weInternet Kutaurirana".
Pakupedzisira vateereri vakapota padanda kune chokwadi chekuti aitamba navo, achireva mudziyo mumwe nokuti zvose izvi zvinoshandiswa.
Tekinoroji geeks inoidaidza kuti "kusangana" uye iyo iPhone zvine nharo chiratidzo kune ese akasungirirwa michina.
Kutendeuka kuno kugara!
Uye pano isu tave nemakore gumi nerimwe uye kusangana kuri kwakanaka uye zvechokwadi pano!
Hapana TV inoda - nharembozha yeiyo
Hapana mudziyo wemitambo unodiwa - nharembozha yeiyo
Kumhanya bhizinesi rako?
Hapana PC inodiwa - nharembozha yeiyo
Hapana redhiyo inodiwa - nharembozha yeiyo
Kutaurirana neshamwari dzako?
Hapana mameseji anodikanwa - Yemagariro midhiya pane nhare mbozha yeiyo
Hapana PC inodiwa - inoyerera pane nharembozha yeiyo.
Kutora foto yemhando yepamusoro?
Hapana kamera inodiwa - nharembozha yeiyo
Hapana chikonzero chekumirira icho paTV - pane app pane mbozhanhare yacho izvo
Pamunwe wako kubva kwakasiyana masosi pane mbozhanhare, ehe!
Instant chenjedzo yezvazvino zvibodzwa kubva kuchikwata chako?
Inopenya kumusoro pane yako nharembozha mukati memasekondi ekunge warohwa
Ini ndaigona kuenderera uye iwe unoziva zvese zviri pamusoro kuti zvive zvechokwadi mune chako chiitiko.
Uye Nhepfenyuro yakasunungurwa kubva pane izvi? Pamwe kwete!
Pane chero munhu akambotenda zvechokwadi kuti PTT kutaurirana kwerudzi rwunoshandiswa neredhiyo hobbyists kwaizosara kunze yenyika yakatendeuka?
Kumuka kwemaapplication akaita saZello uye IRN paTeamspeak ingori shanduko yechisikigo yezvanga zvichiitika mune rese repasi kwemakore mazhinji. Radio hobbyists vanogona kurwisa iyo, asi zvakatoitika, muchokwadi, zvakatoitika…
Kuwedzera kweRadio Network
Kumuka kweiyo Network Radios phenomenon parizvino inoita kunge isingamiswe.
Iyo suite yeChannel paZello inonzi "Network Radios" (iyo ndeyaG1YPQ) ine vanopfuura vanyoreri ve4000, vanopfuura 2000 vashandisi vakavimbika uye havawanzo nyarara.
Iri kubhowekana rinenge zuva rese nevanofarira redhiyo, hams nevashandisi vasina kupihwa marezenisi, kubva kumatunhu anotaura chiRungu, vese vachitaurirana nenzira dzinoyeuchidza mazuva ekare eTop Band nemamita maviri.
Iyo inzvimbo yakanyatsogadziriswa, zvakare, yakachengeteka saka uye nzvimbo yakanaka yekutora nhanho dzako dzekutanga kuita chitsva chekuvaraidza.
Kana pamwe nzvimbo yaunogona "kutsenga mafuta" nevamwe vanofarira redhiyo, nzvimbo yekutaura pamusoro pekufambira mberi kwako kudzidza CW kana matambudziko auri kurova kugadzira iyo nyowani nyowani, kana pamwe kutowana nzira yako kutenderedza iyo Android OS uye vamwe yematombo akavanzika muZello software.
Kana usati waedza izvozvi, wakamirirei?
Dai Steve Jobs anga achiri pasi pano, ndine chokwadi chekuti angadai akadada ne "nyika yake yakashandurwa" - uye ndiani anoziva, angadai akatove "mumhepo" paNetwork maRadio pamwe nesu tose!